Tsy mbola nivoaka ny lalàm-pifidianana : efa mihoatra ny 10 ireo kandidà filoham-pirenena | NewsMada
Tsy mbola nivoaka ny lalàm-pifidianana : efa mihoatra ny 10 ireo kandidà filoham-pirenena
Mbola eny anivon’ny Antenimieram-pirenena hatramin’izao ilay volavolan-dalàna fehizoro mifehy ny fifidianana. Tombanana any aorian’ny 3 avrily ny handaniana izany. Efa maromaro sahady anefa ireo nan ambara ny filatsahan-kofidiny na koa efa maka bahana sy miomana amin’izany. Anisan’ny efa nanambara izany ny filoha teo aloha, Ravalomanana. Na izany aza, mbola andrasana ao anatin’io volavolan-dalàna io ny mety haha kan didà azy na tsia. Efa ofisialy koa ny haha kandidà ny pasitera Mailhol. Natolotry ny antokony, GFFM. Manampy ireo ny avy amin’ny antoko Maeva, amin’ny alalan-dRaharimanana Mamy. Eo koa ny antoko Vitantsika, nanolotra an-dRaharimanana Patrick . Vao herinandro kosa izao ny nanambaran’i José Vianey ny haha kandidà azy, atolotry ny Ram.
Telo ireo vehivavy efa nanambara ho kandidà
Efa telo sahady ireo andriambavilanitra ho kandidà ho filoham-pirenena. Anisan’izany ny avy amin’ny PSD, Bezaza Eliana sy Ramaroson Arlette natolotry ny ANM. Farany teo, naneho fahavononana ny kandidàn’ny PLD, Rabeharisoa Saraha. Mety hanampy ireo vehivavy ireo ilay mpanakanto, Ninie Donia. Efa nanambara ny fahavonany ho kandidà any anaty tambajotran-tserasera.
Anisan’n y tombanana efa ho kandidà koa ireo Praiminisitra telo mirahalahy, teo aloha. Mety hatolotry ny UNDD, Beriziky Omer. Tsy mbola fantatra kosa ny antoko hiaraka amin’ny Jly Ravelonarivo Jean. Manampy azy ireo na mbola manjavoizavo aza, ny Praiminisitra lefitra teo aloha, Botozaza Pierrot. Mananontanina koa ny haha kandidà ny tale jeneralin’ny Tahirim-bolam-panjakana teo aloha, Robimanana Orlando
Ho kandidà tokan’ny mpanohitra Rajoelina…
Mbola andrasana kosa ny haha kandidà ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina. Kandidà tokana hatolotry ny Armada, ahitana ny Mapar, nyMalagasy miara-miainga, ny Hiaraka isika, ny Avana ary ny Maitso hasin’i Madagasikara, miaraka amin’ny Freedom ny tenany. Tahaka izany koa ny filoha amperinasa, Rajaonarimampianina Hery. Hatolotry ny HVM sy ireo vovonana na fikambanana manohana azy.
Araka izany, mbola hanao ranolava ny fanambarana filatsahan-kofidina aorian’ny fahalanian’ny lalàm-pifidianana. Miandry izany ny sasany vao hanapa-kevitra hiroso na tsia.